Dị ka technology ọganihu, ya mere, mee hackers onye mgbe kwụsị achọta ụzọ circumvent usoro. Ọnụ ọgụgụ nke hackers bụ na ịrị elu nke pụtara na ọ bụghị nanị na kọmputa ọrụ kamakwa mobile ọrụ kwesịrị nọgide iyi egwu nke ndị ndị a hackers. Virus na gunpoder bụ ndị kasị obi ọgụ nkịtị ka android smartphones. Ke ibuotikọ emi anyị a lee anya na ụfọdụ ndị kasị mma antivirus ngwa na-arụ ọrụ Wezuga ọma maka android ekwentị ọrụ
Avast Mobile Nche
Avast bụ otu ụlọ ọrụ na wuru ya aha na PC ụwa na ya anya ka ha na-n'ịkụgide ya ala na mobile ụwa. Nke a antivirus awade a dum n'usoro nke atụmatụ maka ọrụ sitere na site nchedo malware mgbochi na-ezu ohi functionalities. Na Avast, nchebe nke ngwaọrụ e mewo ka praịm nyere na ngwa na-enye a web ọta, netwọk Manager na ihe ngwa njikwa imeli android ọrụ top nche. Na n'ógbè nke mgbochi-ezu ohi, na-eji ngwa na-ahapụ ọrụ soro, ịchọta na ịgbanwe zuru ngwaọrụ remotely. Ọ ọbụna na-agụnye firewall configurations maka gbanye mgbọrọgwụ android ọrụ. The ịma mma bụ na ngwa bụ nnọọ oké ọnụ-onye pụrụ inwe zuru atụmatụ na $ 15 kwa afọ.
Cheap tụnyere ndị ọzọ ngwa
Ọ nwere obosara n'usoro nke atụmatụ
Ọ na-adịghị arụ ọrụ nke ọma na ndị agadi na ekwentị mkpanaaka na
360 nche Anti-virus
Nke a bụ ihe nile na otu ngwá ọrụ na e mere mbo mbuli ngwaọrụ gbapụrụ ọsọ ebe na-elekwasị anya na ihe ọ bụla malware nke nwere ike ife efe ya usoro. Na okwu nke na-agba, na-eji ngwa dị mma na nhicha junk faịlụ dị ka cache faịlụ na Ram. The ngwá ọrụ na-enye ezigbo nche site scanning nke na ebe nchekwa ọnọdụ na ngwa na ihe ndị kasị ruo ụbọchị arụmọrụ. Ọ nwere nti mgbochi na-ezu ohi atụmatụ tinyere site nzuzo iji gbochie mkpa data faịlụ site na-enweta site na-enwetaghị ikike mmadu.
Nwere ike ihicha faịlụ niile ekpe site ochie ngwa
Ọ na-nwere a data ileba anya
Ọ bụ obi tara mmiri na nwere egwu
Ọ nwere ike ịkụda ochie smartphones
Ọkara ihe ọzọ antivirus na kemgbe a ide na PC ahịa esighịkwa àgwà nke ọrụ ya awade ka PC ọrụ. Na android ụwa, ya mmanya nakwa na e setịpụrụ nnọọ elu na a ngwa na-gosiri n'etiti ndị kasị mma antivirus ngwa ọdịnala na ụwa. Ya mere, gịnị na-eme ka a na ngwa nnọọ chọsiri ike inweta? Ihe mbụ na-eme ka ọ mara mma bụ na ọ bụ free pụtara na ị nwere ike mfe ịnweta ya na-enweghị iji mikpuo n'ime anyị akpa. Ọ bụ a multifunctional na ngwa na-enye nchekwa ezie na nzacha n'ihi na obi omume na ngwa ọdịnala na na web. The ngwa bụ karịsịa nnọọ ọtọ na-enye web nche dị ka e mere ya ka iṅomi weebụsaịtị na URLs maka egwu. N'elu nke ndị a, ngwa ahụ dokwara mma na-anapụta smart mgbochi na-ezu ohi atụmatụ iji belata Ohere nke ị adịkwa nzuzo gị na ekwentị na-ezu ohi. Nke a na-adịghị echefu na ngwa na-enye ndị na-eme ka ndị ọrụ na-hazi nche na ekwentị data dị ka ngwa akpọchi n'etiti ndị ọzọ.
ọ nwere nza atụmatụ
Ọ na-ekwe ngwa mkpọchi, ngwa nkwado ndabere na mpaghara SIM mkpọchi
Ọ bụghị otú mfe iji
Ọ na-enye top nchebe na Stock Android Nchọgharị ma ọ bụghị dị ukwuu na ihe nchọgharị ndị ọzọ
Ugbu a, ọ bụrụ na ị na-adịghị a kọmputa novice, mgbe ahụ, bitdefender abụghị ihe ọhụrụ unu okwu na. Dị ka nke ikpeazụ na mbụ, nke a antivirus maara na PC ọrụ na ọ na-inyịme ókèala ya ka android igwe. The antivirus bụ ewu ewu ekele ya mfe iji interface na-enye ohere ọbụna Newbies ịnyagharịa mfe. Ọ na-adịghị eru atụmatụ na ọ na-enye kacha malware nchebe na akpaka usoro-enyocha kwa gbakwunyere ya nwere mgbochi na-ezu ohi na nzuzo atụmatụ. Ọ ga-enye gị nche na nchọgharị dị ka chrome, opera Obere n'etiti ndị ọzọ
Arụ ọrụ nke ọma na ndị agadi na android igwe
Ọ na-enye ikenyeneke mbiet nche
Ọ nwere mfe atụmatụ
Mcafee Mobile Nche
Nke a bụ ihe antivirus na e bespoke chepụtara na-enye a otu nkwụsị ahịa maka ya ọrụ n'echiche bụ na o nwere collection nke functionalities. Ọ bụ ngwá ọrụ na ga iṅomi fọrọ nke nta n'ebe ọ bụla n'ime ekwentị na n'èzí ka i nchedo ị na-achọsi maka. The ngwa nwere wijetị na-eme ka ọ dị nnọọ mfe jikwaa nche ọnọdụ si otu ebe. Ọ na-karịrị echiche na mgbochi na-ezu ohi atụmatụ na nzuzo-o nwere a iri na abuo nke abụọ blended ọnụ a ikele iji nweta ọrụ nche ọbụna remotely.
Ọ nwere oké atụmatụ
Ọ na-erepịakwa nza nke ike
Atụmatụ na-anọ n'ebe malwares
Iji zere malware na-efe efe na anyị anya na ihe ụfọdụ i nwere ike ime:
Wụnye ihe antivirus-The ihe mbụ ị ga-mkpa ime bụ iji hụ na i nwere antivirus nke pụrụ inyere gị jikwaa nche ọrụ nke ekwentị gị.
Ị kwesịrị ị na lee anya nke ọma na ihe i bu n'obi na ibudata. Ọzọkwa, download stof si tụkwasịrị obi na isi mmalite. Ka ihe atụ, ị nwere ike ibudata gị ngwa site Mmepụta isi mmalite kama atọ ọzọ na saịtị.
Jiri ọhụrụ Android Version-a bụ iji hụ na i nwere OS na fixes ọ bụla chinchi nke nwere ike na-erigbu obi ngwá ọrụ na mmadụ.
> Resource> ihichapu> Top 5 Free Antivirus ọcha virus na gunpoder si gam akporo ekwentị